Shiriplizi pizzas nebhekoni uye mozzarella | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 14/08/2021 10:00 | Vegetable Recipes, Nyore Mapepa
Iwo ma piza andinofunga kuti nhasi ave nyowani yakakwana kana kudya kwemanheru zvisina kurongwa kwehusiku kwevhiki. Uye ndezvekuti idzi pizzas dzeubergine dzine bhekoni uye mozzarella zviri nyore kugadzirira uye vanofarira vangangoita vese nekuda kwekubatanidzwa kwavo kwezvinhu.
Pfungwa ye shandisa maruva eubergine sehwaro yemapizi inoratidzika kwandiri kunge zano rekutanga. Kubva kwavari unogona kugadzira chiuru nematanho musanganiswa nekusanganisa zvinongedzo zvaunofarira zvakanyanya. Ini ndasanganisa pachiitiko ichi hanyanisi, mhiripiri, bhekoni uye mozzarella, saka inzwa wakasununguka kugadzira.
Mazai epirisa, kuwedzera pakuve nyore, ine hutano uye inokwezva nzira yekuburitsa eggplant kune vadiki uye vadiki. Sarudza izvo kana hombodo huru kuitira kuti mabheseni epitsa ave nerupo uye ashande sekushumira kamwechete. Dzinokwezva meso ako here? Gara wakatarirwa nhanho nhanho.
aubergine pizzas nebhekoni uye mozzarella
Iyi pizzas yeabergine ine bhekoni uye mozzarella inofadza vana nevakuru sekutanga kana zvisina kurongwa kwemanheru.
1 yakakura eggplant
5 tablespoons tomato muto
1 bhora renyati mozzarella
Tinotanga nekucheka hanyanisi muna julienne uye mhiripiri mune zvidimbu zvidete.
Isu tinochekawo mabhekoni zvimedu uye mozzarella muzvidimbu.
Pashure tinopisa huni kusvika 190ºC, tinoisa tray nebepa rekubheka uye kupedzisa tinoikwesha nemafuta emuorivhi.
Zvino kana, pamwe nezvose zvakagadzirwa kare, cheka eggplant muzvidimbu hapana anopfuura 1 sentimita gobvu.
Isu tinoisa machira pane yekubheka tireyi uye tinowaridza madomasi akagochwa pavari.
Pashure tinogovera hanyanisi uye mhiripiri iri mitsetse pairi.
Nezve miriwo tinoisa mabhekoni mabhande uye kupedzisa, mozzarella zvidimbu zvataive tachengeta.
Mwaka, wedzera oregano dikiKana tichiifarira, tinoiisa muchoto, tichiisa tireyi muhafu yepasi.
Tinobika pa190ºC nemoto wakaderera kwemaminitsi gumi. Mushure mezvo, tinodzikisa tembiricha kusvika ku10ºC uye tinobika nekupisa kumusoro uye pasi kudzamara pizzas yeabergine yagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Mashiriplizi pizzas nebhekoni uye mozzarella
Mbatata uye orenji saladhi